Ityoophiyaan loltoota isii daangaa Eertiraa irraa kaasaa jirti - NuuralHudaa
Ityoophiyaan loltoota isii daangaa Eertiraa irraa kaasaa jirti
On Aug 16, 2018 21
Itoophiyaan loltoota isii waggaa 20 oliif daangaa Eertiraa irra turan kan baasaa jirtu tahuu BBC gabaase. Loltoonni lokkoofsaan heddu ta’an guyyaa hardhaa daangaa biyyoota lamaanii iddoo Shiraaroo jedhamu irraa konkolaataa 70 fe’amanii, gara jiddu gala biyyaatti kan socho’aa jiran tahuu jiraattoonni naannichaa BBC’tti himan.
Bulchaan godina Kaaba Dhiha Tigraay Obbo Taklaay Gabramadhiin akka jedhetti, loltoonni socho’aa jiran isaan adda durummaan daangaa irra jiran osoo hintaane kanneen duubaan gargaarsa kennaa turan tahuu hime.
Baankiin Hijraa Damee Haaji Hasan Gammadaa Magaalaa…
Baankiin Hijraa Damee isaa kan magaalaa Dirree Dhawaa…
Lolli Ityoophiyaa fi Eertiraa jiddutti May/1998 hanga June/2000tti gaggeefame lubbuu nama kuma 80 ol galaafate. Waldhabbiin waggaa 20 ol biyyoota lamaan jidduu ture, ji’a dabre keessa waliigaltee nagaha mallatteessuun kan xumuran tahuun ni yaadatama.
Nuuralhudaa	 May 21, 2022
Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan ta’u qaamma…
May 22, 2022 sa;aa 1:54 pm Update tahe